Ny Semalt Islamabad Expert: Inona no atao hoe spam referrer amin'ny Analytics & amp; Ahoana no hisakanana izany?
Ny Semalt Islamabad Expert: Inona no atao hoe spam referrer amin'ny Analytics & Ahoana no hisakanana izany?
Raha toa ianao mahita kaontenera fifamoivoizana sy fitsaboana tsy ampoizina ao amin'ny kaontinao Google Analytics, dia midika fa ny tranonkalanao dia tratran'ny spam. Olana lehibe mitombo ho an'ny webmasters, mpandraharaha, mpitoraka blaogy ary mpitantana ny media sosialy satria mety hanimba ny toerana misy anao ny habaka referrer ary sarotra ny tsy miraharaha.
Mandehana any amin'ireo toro-hevitra mahavariana avy amin'i Sohail Sadiq, manam-pahaizana amin'ny Semalt Digital Services.
Ny spam referrer dia noforonin'ireo crawlers, spiders, ary bots miaraka amin'ny fikasana hanintona anao any amin'ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana ary mitaky anao hividy ny vokatra an-tserasera. Ity spam ity dia mikendry ny antontan'isa momba ny tranonkala ary nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny tranonkala iray vaovao vao haingana no vao haingana dia ny link.zhihu.com. Raha mitsidika an'ity URL ity ianao na iray mitovy amin'izany ianao, dia haverina mankany amin'ny pejy iray ahafahan'ireo spammers mividy ny vokatrao na hampiroboroboana ny votoaty an-tserasera. Matetika ny fitsangatsanganana spam dia mikendry ny hampiroborobo ny viriosy sy ny malware amin'ny aterineto, ary mila mitandrina ianao rehefa mitsidika ny rohy spam ary mijery azy amin'ny aterineto. Ataovy azo antoka fa esorinao ao amin'ny kaontinao Google Analytics izany
Mety hieritreritra ianao fa mahasamihafa ny spam referendra satria mampitombo ny fifamoivoizana ao amin'ny tranonkalanao, saingy diso ianao..Ny bots and spiders dia miteraka io karazana fifamoivoizana io, ary tsy misy ireo fitsapana azonao. Mazava ho azy fa hampitombo ny taham-pidinao izany ary ny fotoana laniana amin'ny tranokalanao dia zero faharoa. Ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia tsy hitondra vokatra tsara ho anao ary hanakorontana ny data Google Analytics. Miankina amin'ny paikady referrera dia tetikady mainty SEO ary ampiasain'ireo orinasa tsy ara-dalàna sy mpanome tolotra aterineto.
Ahoana no hanakanana ny spam referrer?
Azonao atao ny manakana ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana an-tsehatra ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Noho izany, tokony hamorona sivana ianao ary hanaisotra ny fifamoivoizana mahatsiravina sy ambany. Raha hanaisotra io karazana fifamoivoizana io dia mandehana any amin'ny sehatry ny Admin ao amin'ny kaonty Google Analytics ary tsindrio ny safidy Filter. Eto, tsy maintsy misafidy ny safidinao Add Filter ianao mba hanombohana ilay mpitsikilo. Ny dingana manaraka dia ny fanaovana ny anaran'ny sivana toy ny darodar.com, link.zhihu.com, na zavatra toy izany. Ataovy azo antoka fa nesorinao ny adiresy URL rehetra mifandraika amin'ny habaka amin'ny alàlan'ity tetika ity, ary mety ho azo alefa mora foana ihany koa ny URL maromaro. Safidio ny safidy Custom Filter ary avy eo dia fidio ny loharanon'ny fanentanana ao amin'ny sehatra Filter Field.
Eto ambany eto ny darodar.com, na link.zhizhu.com ao amin'ny lahatsoratry ny Pattern Pattern mba hahazoana ny zavatra rehetra. Azo atao ny mametraka URL maromaro amin'ireo sivana; Ho an'ity, tsy tokony manondro URL ianao ary afaka manamboatra filaharam-be amin'ny sariohatra iraisam-pirenena na amin'ny faritra ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Amin'ny fametrahana ireo sivana sy mazoto dia afaka manatsara ny fahamarinanao sy ny kalitaon'ny data Google Analytics ianao. Azonao atao koa ny miaro ny tenanao sy ny tranonkalanao amin'ny adiresy mampiahiahy sy mampiahiahy ary manakivy ny fomba fitsaboana informatika amin'ny ankapobeny. Tsy hanam-potoana izany rehetra izany, ary ny vokatra dia lehibe foana, ka tokony hanohy hamorona filtre vaovao ho an'ireo URL mampiahiahy ao amin'ny kaontinao Google Analytics ianao Source .